မင်းကောင်းချစ် – “ ကျောင်းသားဆိုတာ” | MoeMaKa Burmese News & Media
ဖေါက်ပြန်သူတွေလို … ပေါင်းမစားဘူး ။
 ကျောင်းသားဆိုတာ ….
ပုတ်သင်ညိုတွေလို အရောင်…. ပြောင်းမသွားဘူး ။
ဖိနှိပ်သူထံ အညံ့ခံ …. တောင်းမစားဘူး ။
တိုင်းပြည်အနာဂါတ်ကို …. ရောင်းမစားဘူး ။
 ကျောင်းသားကို မမြူဆွယ်နဲ့ 
 ကျောင်းသားဆိုတာ …. အဖြူထည် ။
 စစ်သားတွေ စစ်တန်းလျှားပြန်တဲ့တနေ့ …
 ကျောင်းသားတွေ ကျောင်းခန်းထဲပြန်ဝင်လိမ့်မယ်။
 စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းရင် …ကျောင်းသားက အာဏာထိမ်းလိမ့်မယ် ။
 တရားမှု့ပျောက်ရင် …. ကျောင်းသားထုရောက်လါမယ် ။
 တကယ်တော့ ကျောင်းသားဆိုတာ …. ဒေါင်းတရားထုံတဲ့ အကောင်းစားသူပုန်ကွဲ့ ။
(photo – facebook pages)
2 Responses to မင်းကောင်းချစ် – “ ကျောင်းသားဆိုတာ”
Fedanddem Zomi on February 13, 2015 at 4:02 am
The threatening words from the illegally elected President Tein Sein, and the illegally drafted into the Cabinet Lieutenant General Ko Ko, and various state and region chief ministers show that the Brutal Bamar Racist Buddhist Fascist Mercenary Terrorist Rapist (BBRBFMTR) USDP Party of Savage Swan-arr-shin Gangsters, that the Brutal Bamar Racist Buddhist Fascist Mercenary Terrorist Rapist (BBRBFMTR) USDP Army of Robbers, Looters, Thieves, Torturers, Murderers, and Rapists, and that the Brutal Bamar Racist Buddhist Fascist Mercenary Terrorist Rapist (BBRBFMTR) USDP Government of Anti-Democrats, Anti-Federalists, and Liars are considering killing and injuring brave democratic students who are standing up for their rights. But the brave students are not afraid.
Zaw on February 14, 2015 at 12:29 pm
seven stars, education and educated can move myanmar getting advange.
All army, employers, employees, bussiness people, and all population were
being come from StudentS.